Kitra - Lalao fitsapana: Barea CHAN # Elgeco Plus
Hitsapa ny ekipan'ny Elgeco Plus ao an-jaridainan’ity farany eny By pass – Antananarivo ny Barea CHAN izao tolakandro izao. Lalao fitsapana faharoa izy ity, tafiditra amin’ny fanomanan'ny Barea CHAN ny lalao miverina amin'ny Namibia, hamafisina hatrany ny eo amin'ny lafin'ny fanafihana fa tsy hionona amin'ny fiarovan-tena fotsiny, hoy i Franklin, mpanazatra. Nandresy 2 noho ny 0 ny Zanakala FC ny Barea CHAN tamin’ny lalao fitsapana voalohany notanterahina tamin’ny Alahady lasa teo Nibata fandresena 1 noho 0 ny Barea CHAN nanoloana an’i Namibia, tamin’ny lalao mandroso notanterahina tetsy Mahamasina tamin’ny 22 septambra 2019. Hatao any Namibia amin’ny 19 oktobra 2019 kosa ny lalao famerenana. Raha tafavoaka eo ny Barea CHAN dia hahazo tapakila hiatrehana ny CHAN 2020, na ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika amin'ireo ekipam-pirenena rafetin'ireo mpilalao tsy mila ravinahitra, hatao any Côte d'Ivoire.
lundi, 07 octobre 2019 12:46
Rallye – RIM: Fiara miisa 34 no hifaninana aty Moramanga
Hotanterahina aty Moramanga ny 11, 12 ary 13 oktobra 2019 izao ny RIM (Rallye International de Madagascar) andiany faha-40. Fiara miisa 34 no hifaninana amin’izany.